Izindlela Ezi-7 Zokuthola Izindebe Ezinkulu Ngokwemvelo - Ubuhle
Amaqhinga we-7 Wokuthola Izindebe Ezinkulu (Ngaphandle Kwemijovo Ethusayo)
7 Tricks Getting Bigger Lips
Impela, ungaGoogle udokotela ohlinzayo wepulasitiki, ushayele ukuhlela ukubonisana, ushayele ihhovisi, ukhokhele umuntu ozokufaka izindebe ngenaliti, ulinde izinyanga ezine bese uyiphinda inqubo futhi. Noma ungavele uzame eyodwa yalamasu ayisikhombisa wokuthi ungazithola kanjani izindebe ezinkulu. Ucingo lwakho.
OKUhlobene : Uke Wezwa Ngokuncibilika Kwezindebe Zomlomo? Nakhu Okwenza Sigxile
UJason Merritt / Getty Izithombe
Khipha Izindebe Zakho
Njengoba ama-flakes angenza isikhumba sakho sibonakale siyisicaba, i-DIY scrub esheshayo yenza izimanga ukufaka ivolumu ku-kisser wakho. Ngaphandle kokuthuthukisa ukusakazwa kwegazi, ukukala isikhumba esomile kuvumela izindebe ukuthi zibukeke zicwebezela futhi zigcwele ngokwengeziwe.
Zama iMask-Plumping Mask
Ukukhathazeka kwethu nge-sheet-mask akusazi mkhawulo, yingakho siyizinhloko kulokhu buso bezindebe obuthandekayo . Mane ubhale, beka izindebe bese uzama ukungaphenduli noma iziphi izingcingo ngenkathi ulinde uwoyela wezimbali, i-hyaluronic acid (isikhumba somswakama wesikhashana esizwakala sibuhlungu ekuqaleni), i-collagen ne-cherry ebabayo ekhishwa ukuze ibushelelezi, iphambili futhi zungeza isibunu sakho.
Sebenzisa i-Lip Oil
Njenge-gloss kodwa enezakhi ezinomsoco (sibonga i-mirabelle plum, i-jojoba, i-macadamia nama-hazelnut amafutha), Clarins Instant Light Lip Induduzo Amafutha futhi kusiza izindebe zivele zigcwale ngokugcwalisa imigqa engenamanzi ngomswakama nokungeza ukukhanya. Ingasetshenziswa yodwa, njenge-lip prep ngaphansi kwe-lipstick yakho oyithandayo noma ngaphezulu kombala.
Izithombe zikaGregg DeGuire / Getty
Dwala i-Red Lip
Ngokuqondene nemibala, ama-nudes kanye nama-pinki angayigeza i-pout yakho, kuyilapho ama-purples amnyama nensundu ejulile kungadonsela ukunaka okukhulu ezindebeni ezincane. Esikhundleni salokho, khomba umbala obomvu we-cherry ozokhanyisa ukukhanya bese unikeza ukukhohlisa okubonakalayo komlomo ogcwele.
izinto ezenziwe ngesikhumba esikhanyayo
UMA UGQOKA AMA-PASTEL, SEBENZISA IZIBHANYA PHEZU KWESIPHAKATHI
Esikhundleni sokuvumela leyo pink bubblegum igeze i-pout yakho, vele ungeze ukuthinta kwe-gloss ecacile maphakathi nodebe lwakho lwangezansi nangaphansi ngezansi komnsalo we-cupid yakho wokuthinteka okuzenzakalelayo.
OKUhlobene : Umgunyathi Wokugqoka Izindebe Zekhalenda Njengowesifazane Okhulile
DLULA NGOKUGCWELE I-POUT YAKHO
Akunandaba nombala wezindebe, ungahlala ukhipha le thiphu yosaziwayo yokwenza umculi. Usebenzisa umthunzi we-liner ofana nombala wakho wemvelo, dweba kancane ngaphandle kwendawo ezungeze umnsalo we-cupid yakho naphakathi komlomo wakho ongezansi. Ngemuva kwalokho, yeqa ugcwalise umugqa ngendwangu yakho yezindebe nombala. Vele ugweme ukumboza umlomo wakho wonke ( helloooo , Kardashian), futhi uzokwazi ukukukhohlisa njengochwepheshe.
Okuthunyelwe okwabiwe nguBLINK (@blinkbeauty) ngoJulayi 13, 2017 ngo-7: 35 am PDT
Sebenzisa i-Highlighter ku-Bow yakho ye-Cupid
Yenza izingulube ezibonisa ukukhanya zisebenzele inzuzo yakho ngokusebenzisa induku yokugwedla noma okugqamise umnsalo we-cupid yakho (i-indent encane ephezulu yodebe lwakho olungaphezulu) nasengxenyeni ekhuluphele kakhulu yodebe lwakho olungezansi. I-Voil : Isimo seBrigitte Bardot kumasekhondi angaphansi kweshumi.
OKUhlobene Imikhiqizo Yezobuhle engu-9 Izinzuzo Zokusebenziseka Njalo
hollywood movie uhlu lwezothando
uhlu lwamafilimu obusha buka-2015
amagama ezinwele zezintokazi
kumele ubuke ama-movie omndeni
okufanele ukwenze ukuvimbela ukuwa kwezinwele
isizini yomqhele 2 isiqephu 6